Atletisma – Fifaninam-pirenena :: Nandrombaka medaly betsaka indrindra ireo atletan’Atsimo Andrefana • AoRaha
Atletisma – Fifaninam-pirenena Nandrombaka medaly betsaka indrindra ireo atletan’Atsimo Andrefana
Tontonsa tamin’ny faran’ny herinandro iny teny amin’ny kianja Alarobia ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja atletisma sokajy tanora. Niavaka ireo atleta avy any Atsimo Andrefana. Lasan’izy ireo ny medaly betsaka indrindra izay miisa fito amby dimampolo, ka telo amby telopolo ny volamena raha sivy ambin’ny folo ny volafotsy ary dimy ny alimo.
Ny GST kosa no mendrika teo amin’ny klioba rehefa nahazo medaly roa amby telopolo ireo atleta avy ao aminy, ka sivy ambin’ny folo ny volamena raha telo ambin’ny folo ny volafotsy.
Niavaka teo amin’ny vehivavy latsaky ny valo ambin’ny folo taona Ravaoarisoa Marie Rose (TAF Analamanga) satria nahavita ny hazakazaka 100 m tao anatin’ny fe-potoana 12’’02’ (936 isa) izy. I Damazy Andoniaina (ACM Manakara) kosa no teo amin’ny lehilahy raha nahavita fe-potoana 22’’4’ tamin’ny halavirana 200m (840 isa).
Mendrika ihany koa Razanajafy Brigitte (TAF Analamanga) teo amin’ny vehivavy latsaky ny roapolo taona rehefa tonga voalohany tamin’ny hazakazaka 100m tao anatin’ny 11’’9’ (1.600 isa) izy. Nisongadina kosa Razanakoto Fanomezana (ASJA Vakinankaratra) teo
amin’ny lehilahy tamin’ny sedram-pifaninanana vikin-dava izay nahatsambikinany 7 m 22 (962 isa).
Baolina lavalava – Top 20 Hifarana amin’ny lalaon’ny Uscar sy UASC ireo lalao sakana
Baolina lavalava – «Mondial 2019» Resin’i Japana, mpampiantrano, i Rosia
Fibatana fonjamby- Lalao eran-tany Tafiditra folo voalohany ireo mpikatroka malagasy any Thaïland
Basketball N1B lehilahy :: Lasan’ny ASB Itasy ny anaram-boninahitra
Fomba hafahafa Vehivavy roa matin’ny tangena fa voatondro ho mpamosavy